May 22, 2019 Osman Puntland, Wararka Maanta 3
War-murtiyeed kasoo baxay Shir ay Magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobalka Mudug Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Siciid C/llaahi Deni iyo Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo ay wehlinayaan Xubno kamid ah Golayaasha labad dhinac ayaa looga Xaalada Gobalka Mudug, Iskaashiga Labada dhinac iyo Sharciyadda Doorashooyinka iyo Batrool ay Baarlamaanka Federaalka hor-geysay Xukuumadda Ra’iisulwasaare Kheyre.
Waa heshiiskii Abeesada & Dabagaalaha… wax kale oo dheeraad ah meesha kuma jiraan.
XALKU WAA SIDAN
Anigu xalka ii muuqda waa in Mudug oo dhan Puntland la hoos geeyo oo sidii waagii Boqortooyada Majeerteeniya loo maamulo. Sababtu waa mid iskeed bayaan ugu cad oo ah in aanay Habar Gidirtu inta ay maamul isku raacdo ku heshiin doonin ilaa buunka qiyaame.
Sida la hadal hayo qawaawiirta beeshan ganacsatada ahi waxay ku loollamayaan saliidda madoow ee xeebta Hobyo lagu sheegay oo iimaanka ka soo wada riday. Ismaamul nidaamsan ee shacabkooda wax loogu tarayo la isku ma haysto ee doolar iyo wax daran baa u muuqda.
Sideeda ba Soomaaliya goobo badan baa saliidda madoow waxsoosaar ahaan loogu xisaabtamayaa oo runtii ah qalad weyn iyo qaflad lagaga jiro in uu caalamku hadda ka dib ka maarmayo oo kana hayaamayo saliiddan madoow.
Soomaali uun baa
Sahay laga hayaamiyo
Shidaal laga saahiday
Sahankeedii ku seegtay
Tiisa daryeele aa tu kale ku daro.
Boqortooyada Majeerteen aad sheegeysid horta Harti ha soo xoreyso ka dib ayaan sheeko iskuugu imaaneynaa. Sool iyo Sanaag faataxo lagu ma qaadanin.
Adiguna Kurdish baad tahay oo Jeegaan iyo Maxamuud Saleebaan iskugaa diriraayo. Mudug ha kuu dambeysee Kurdishnimada ka soo xoroow. KKKKK
Maskiin riyo ku noole.